ShweMinThar: Pixel3& Pixel3XL Preview
Pixel3& Pixel3XL တို့ ကို ဒီနေ့ မှာတော့ New York မှာမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး လပေါင်းများစွာထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Rumor တွေ Leak တွေအားလုံးဟာ ဒီနေ့ မှာပဲအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော်တော်များများပြောနေကြမှာသေချာတာတစ်ခုကတော့ Pixel3XL ရဲ့ရှည်လျားလှတဲ့ Notch အကြောင်းပဲဖြစ်နေမှာသေချာပါတယ်။ ဆိုတော့ Notch အကြောင်းနောက်ထားဦး Pixel3နဲ့Pixel3XL က Pixel2နဲ့ Pixel2XL တို့ ထက်ဘာတွေပိုကောင်းလာလဲ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာနဲ့ အရင်စကြတာပေါ့ ။
5.5 လက်မ OLED Display , Resolution အနေနဲ့1080x2160 FHD+ resolution ရှိမယ် ။အရင်ဆုံးအနေနဲ့Display ဆိုဒ် ၊ ဒီ Display ဆိုဒ်ကမနှစ်က Pixel2ရဲ့Display ဆိုဒ်ထက် .5 လက်မပိုကြီးလာတယ်ဆိုတော့သေချာတာက Small Phone တွေရဲ့အဆုံးသတ်ချိန်တစ်ကယ်ပဲရောက်တော့မလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောလို့ ရတာတစ်ခုက Pixel2ရဲ့ 5လကိမဟာ Pixel3ရဲ့5.5 လက်မနဲ့ ယှဉ်ရင် အပေါ်ဘက်ဘောင်တွေနဲ့ အောက်ဘက် Chin တွေသေးသွားတာကြောင့်ဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ဆိုဒ်ကတော့ကွာမှာမဟုတ်တဲ့အချက်ပါပဲ ။ notch မပါလာဖူး ။ Spec တွေလည်းဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမရှိသလောက်ပဲ Software improvement ပိုင်းမှာ Camera ပိုင်းပိုကောင်းလာမယ်။ သိသိသာသာ Hardware Change သွားတာကတော့ Front Camera ဖြစ်ပြီး Dual Camera ဖြစ်လာတယ်။
6.3လက်မ OLED Display မှာ 1440x2960 resolution အသုံးပြုထားတယ်။ ကြီးမားတဲ့ Notch .....အဲ့လိုတော့ပြောလို့ မရ ရှည်လျားတဲ့ Notch ကြီးပါလာတယ် ။ ဒါကတော်တော်များများလုံးဝမကြိုက်တဲ့အချက်ထဲမှာထိပ်ဆုံးကပါနေတဲ့အချက်။ ဒါပေမဲ့ သတိထားရမှာက 18.5:9 aspect ratio ဆိုတော့ ဒီကြီးမားတဲ့ Notch က ဖုန်းရဲ့Display ကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိကွယ်ထားနိုင်သလဲဆိုတာပြောဖို့ စောလွန်းနေသေးသလိုအကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲ Review Unit ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သေချာပေါက် တိုင်းတာပေးနိုင်မှာပါ။
သူလဲ Pixel 2XL လိုပဲသိသာတဲ့ Hardware ပြောင်းလဲမှု့ မရှိဘူး ။ software အားကိုးနဲ့ မိုက်နေတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာထိပ်ဆုံးကဖုန်းတွေလို့ ပြောလို့ ရတဲ့အထိဒီမိတ်ဆက်ပွဲမှာလည်း Software တွေရဲ့Improvement တွေပဲတောက်လျှောက်မိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
Pixel2နဲ့Pixel2XL ထက်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ ?
အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ ပြောခဲ့သလို ဒီဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးဟာသိသာတဲ့ Design ပိုင်း Hardware ပိုင်းမပြောင်းလဲသွားပဲ Software ပိုင်းသာသိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာထက် Improvement လုပ်လာတဲ့ဖုန်းနှစ်လုံးပါ။
ဆိုတော့ pixel3XL ရဲ့ Notch ကိုဒီနေရာမှာနဲနဲအပြစ်တင်တော့စောချင်တာလေးတွေရှိလို့ ထည့်ပြောပါရစေ ။ ဒီလို ရှည်လျားတဲ့ Notch ကိုဘာလို့ အသုံးပြုထားတာလဲ ? ကောင်းမွန်တဲ့ Faceunlock Feature ပါလားဆိုရင်မပါဘူး ။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ Notch ကြီးထဲဘာတွေထည့်ထားလို့ ကြီးတာလဲဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိနေတာတစ်ခုက Speaker ပါ ။Google က ဒီ Pixel3နဲ့Pixel3XL ဖုန်းတွေဟာ
Pixel2နဲ့Pixel2XLဖုန်းတွေထက် 40% အသံပိုကျယ်တယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကယ်ရောအသံထွက်ကောင်းမွန်ဖို့ အတွက်အဲ့လောက် Notch ကိုကြီးအောင်လုပ်ပြီးမြှပ်ထားဖို့ လိုလားဆိုတာကတော့
Google ကပဲသိပါလိမ့်မယ် ။သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဒီ Notch ကြီးက Pixel3XL အတွက် Big Annoy တစ်ခုဆိုမမှားပါဘူး ။
ကျောဘက် မှာ wireless Charging အတွက် Glass back ကိုသုံးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Soft touch glass ဖြစ်တဲ့အလျောက် လက်ရာထင်တာတွေရှိမှာမဟုတ်သလိုဒီ Glass ကိုလည်း Gorilla Glass5ကိုအသုံးပြုပေးထားတာပါ။ စကားမစပ်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့ BuildQuality ဆိုတာဒီလိုမျိူး BQဆိုတာသေချာပါတယ်။
Camera ပိုင်းမှာ Back Camera အတွက် Hardware ပိုင်းပြောင်းလည်းမှု့ မရှိပဲ software ပိုင်းမှာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
Top Shoot mode
Camera App ထဲမှာ Top Shoot Mode ဆိုတဲ့ Mode အသစ်တစ်ခုပါလာခဲ့ပြီး ဒီ Mode မှာတော့ ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကို Device ရဲ့Machine Learning နဲ့AI တို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဒဲ့ပြောရရင် စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်ပုံမဖြစ်အောင် Capture ဖမ်းပေးနိုင်တဲ့ Mode ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ Night Mode ဖြစ်ပြီး Low Light လို အနေအထားမျိုးမှာ အကောင်းဆုံးပုံထွက်အောင် image processing ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ ။ဒါကိုတော့ Pixel2မှာတဲကပြိုင်ဘက်ကင်းတာမြင်ထားပြီးသားဆိုတော့အံအောစရာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါ။
ဒီ Feature ကတော့ Single Lens သာအသုံးပြုထားတဲ့ Google က Telephoto ရိုက်ကူးမှု့ တွေအတွက် Image ကို Brust shoot နဲ့ရိုက်ကူးလိုက်မှာဖြစ်ပြီးပုံတွေရဲ့ Details တွေကိုပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကာ Zoom နဲ့ရိုက်ကူးတဲ့ပုံတွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Software improvement ဟာ Single Lens သာသုံးထားတဲ့ Google ကTelephoto အတွက် Lens သပ်သပ်တစ်လုံးထည့်သွင်းထားတဲ့ဖုန်းတွေကို ဘာတွေလျှေယက်လုပ်နေတာလဲ ဆိုပြီးလှောင်လိုက်သလိုပါပဲ ။ တစ်ကယ်ရော ဒီ improvement ဟာ ကောင်းမွန်ပမလားကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
AR ( Argumented reality) တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာနောက်ပိုင်းမှာသိသာလာတာနဲ့အမျှ Pixel3နဲ့ pixel 3xl တို့မှာလဲတိုးတက်မှု့ တွေလုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ Marvel နဲ့ပေါင်းပြီး Marvel ရဲ့ Super Hero character တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါတွေမှာ AR နဲ့ထဲ့သွင်းနိုင်မှာဖြစ်သလို Playmoji Character တွေကလည်း expression တွေလိုက်ပြီး react ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Playground mode ကတော့ အရင် pixel ဖုန်းတွေမှာပါရရှိမှာပါ။
Front Camera မှာတော့ Dual Camera setup ဖြစ်လာသလို 8MP Dual Camera ကိုအသုံးပြုထားပြီး မတူညီတဲ့ Lens နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ 97 degrees wide lens နဲ့ နောက်တစ်ခုကိုတော့ 75 degreeသာမန် Lens ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက 97 Degrees Lens ဟာ အဖွဲ့ လိုက်Selfie ဆွဲတာတွေနဲ့ ရှုခင်းလှတဲ့နေရာတွေမှာ Selfie ဆွဲနိုင်ဖို့ နဲ့75 degrees Lens ကတော့သာမာန် Selfie ရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးထားတာပါ။
Pixel3နဲ့Pixel3XL ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ Qualcomm ရဲ့Snapdragon 845 SoC ကိုအသုံးပြုထားတယ် ။ RAM 4GB နဲ့Storage Option အတွက် 64GB /128GB နှစ်မျိုးလာမှာဖြစ်ပြီး memory Card တော့ထပ်မံထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Battery တွေအနေနဲ့ တော့ Pixel3XL မှာတော့ 3430 mAh Battery နဲ့Pixel3မှာတော့ 2915 mAh Battery ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက 18W Charger ဘူးထဲမှာပါလာမှာဖြစ်သလို7နာရီစာအသုံးပြုမှု့ အတွက် 15 မိနစ်နဲ့ အားပြန်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်သလို Wireless Charging စနစ်လဲပါဝင်လာပါတယ် ။ ဒီ Wireless Charging စနစ်အတွက် ကို Pixel Stand နဲ့ အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Pixel Stand ကိုသီးသန့် ဝယ်ယူရမှာဖြစ်သလို Pixel Stand ကို Pixel3နဲ့Pixel3XL တို့ နဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ Google Home အနေနဲ့ လည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ Pixel3နဲ့Pixel3 XL တို့ အတွက်ဘူးထဲမှာ Pixel USB C ear buds တစ်ခုပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးသဘောကျစရာပါ။ ဒါ့အပြင် Tybe C to Dongle ဘာပါလာသေးတယ်ဆိုတော့.....သေချာတကအနည်းဆုံးနောက်ထပ် $9 မကုန်တော့တာပါပဲ 😁😁
Pixel 3နဲ့ Pixel3XL ကိုတော့အရောင် ၃မျိုးနဲ့ထုပ်လုပ်ပေးသွားပြီး Black, white & Not Pink လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ (ပန်းနုရောင်) တို့ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းတွေကတော့ pixel3အတွက် $799 နဲ့ pixel 3XL အတွက်ကိုတော့ $899 ကစတင်ပြီးရောင်းချပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာတာက Google Pixel3XL ရဲ့Notch ဟာ့ကျွန်တော်တို့ လို Pixel ဖုန်းလဲသုံးချင် ရှည်လျားတဲ့ Notch ကြီးကိုလည်းကြောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် တော့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ခြားဘက်ကပြန်တွေးရင် ပိုကောင်းတဲ့ resolution ရမယ် ပိုမိုများပြားတဲ့ Battery ပမာဏရမဲ့ Pixel3XL ကလည်းသဘောကျစရာဖြစ်နေမှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က ဈေးနှုန်းပါ။ မနှစ်က Pixel2နဲ့Pixel2XL ရဲ့ ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်က $200 ဖြစ်ပြီး အခု Pixel3နဲ့Pixel3XL တို့ ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်က $100 သာဖြစ်နေတော့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အခြေအနေကိုထပ်ဖြစ်စေပြန်တဲ့ ကျဉ်းတဲ့ကျပ်ထဲကို Google ကအလွယ်တကူဆွဲသိမ်းလိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေအောက်ရောက်သွားတာသေချာပါကြောင်း................................
P.S - Pixel3နဲ့Pixel3XL တို့ ဟာ Single Sim များဖြစ်တဲ့အကြောင်းမမေ့မလျော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အကြောင်းလေးပါသတိပေးလိုက်ပါတယ်။
မူရင်း စာမျက်နှာ - MMPR